Waa maxay ujeedka rasmiga ah ee Kenya ka leedahay eryidda safiirka Soomaaliya? – Somali Top News
February 17, 2019 February 17, 2019 Somali Top News	0 Comments
Go’aankii ay garsooreyaasha maxkamadda ICJ ku aqbaleen dacwadda Soomaaliya
Kiiska maxkamadda ICJ ka hor, Kenya waxay ku doodeysay in dhul badeedkaas ay Somaliya ugala wareegtay heshiis ay kala saxiixdeen, sidaas awgeedna ay xaq u leedahay milkiyaddiisa.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa dib ugu laabanaya Muqdisho, ka dib markii ay dowladda Kenya amar ku siisay inuu xafiiskiisa albaabada u laabo isla markaana faarujiyo Kenya.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa u sheegay in go’aankan kahor, Kenya ay dowladda Soomaaliya u dirtay warqad ay uga dalbanaeyso in raaligelin ay ka bixiso arrinkaasi beecinta shidaalka ah, dibna ug laabato.
← Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka oo si kulul kaga hadlay go’aankii Kenya
Faah-faahin: Ciidamada AMISOM oo qaraxyo xoogan lagula eegtay Muqdisho →